အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဗီဇပြောင်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်မှု ပထမဆုံးတွေ့ရှိကြောင်း အတည်ပြု - Xinhua News Agency
ဝါရှင်တန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ဗီဇပြောင်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ပထမဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဆိုအရ သိရသည်။
ယင်းသည် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာသတင်းများအရ သိရသည်။ဗီဇပြောင်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးထံတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ခရီးသွားရာဇဝင်မရှိကြောင်း ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jared Polis က ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအမျိုးသားသည် Elbert ကောင်တီတွင် သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်လျက်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်တိုင်အောင် သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း Polis က ဆိုသည်။အဆိုပါ အမျိုးသားနှင့် အနီးကပ်ထိတွေ့မှုရှိသူများကို ခွဲခြားသိရှိထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ထိတွေ့မှုခြေရာခံခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆိုသည်။ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် ဓာတ်ခွဲခန်းသည် ခေတ်မီ စစ်ဆေးမှုနမူနာများ လေ့လာဆန်းစစ်မှုမှတစ်ဆင့် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကို ပထမဆုံး လျင်မြန်စွာ ခွဲခြားသိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဓာတ်ခွဲခန်းက ရောဂါတွေ့ရှိမှုကို အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး (CDC) ထံ အတည်ပြုကာ အစီရင်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Polis က ပြောခဲ့သည်။
“ဒီ ဗီဇပြောင်း COVID-19 အသစ်အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ အများကြီးမသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယူကေမှာရှိတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ သိသိသာသာ ပိုမိုကူးစက်မြန်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကို သတိပေးနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။“ကော်လိုရာဒိုမှာ နေထိုင်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘေးကင်းရေးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထိပ်တန်းဦးစားပေးဖြစ်ပြီး ဒီကိစ္စနဲ့ COVID-19 လက္ခဏာတွေအားလုံးကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမှာပါ။ အဆင့်အားလုံးမှ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှု ကာကွယ်ရေးနဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေပါတယ်” ဟု Polis က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဦးစီးဌာနက အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Jill Hunsaker Ryan က ပြည်နယ်အနေနဲ့ လက်ရှိတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှု လျော့ပါးရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင်လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ မကြာသေးမီက ဗီဇပြောင်း SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်အသစ် တွေ့ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် တင်းကြပ်သော ဆောင်ရွက်မှုများကို ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ဗိုင်းရပ်စ်များသည် သန္ဓေပြောင်းလဲမှုမှတစ်ဆင့် မကြာခဏအသွင်ပြောင်းလဲလေ့ရှိပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကနဦးလေ့လာဆန်းစစ်မှုများက ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်သည် ယခင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်များထက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုကူးစက်နိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားကြောင်း CDC က ဆိုသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် လေကြောင်းခရီးသည်များအနေဖြင့် ခရီးမထွက်ခွာမီ ၇၂ နာရီထက်မပိုသောအချိန်က စစ်ဆေးထားသည့် ရောဂါပိုးကင်းစင်ကြောင်း ဆေးစစ်ချက်အဖြေ လိုအပ်သော ညွှန်ကြားချက်အသစ်သည် အမေရိကန်၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်က စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ခရီးသည်များအနေဖြင့် ဗြိတိန်မှ အမေရိကန်သို့ မထွက်ခွာမီ သုံးရက်အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုအဖြေ အထောက်အထားအား လေကြောင်းလိုင်းထံ ပေးပို့ရန် လိုအပ်ကြောင်း CDC က ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ကြေညာထားသည်။
လေကြောင်းလိုင်းများအနေဖြင့်လည်း လေယာဉ်မထွက်ခွာမီ ခရီးသည်များအားလုံး ဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်ကြောင်း ရလဒ်ကို အတည်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ခရီးသည်တစ်ဦးဦးက ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုကို မပြုလုပ်လျှင် လေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် အဆိုပါ ခရီးသည်အား လေယာဉ်ပေါ်တက်ရောက်ခွင့် ငြင်းပယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း CDC က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းအထိ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၁၉.၅ သန်းနီးပါးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၃၃၇,၄၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ်၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ကောက်ယူထားသည့် စာရင်းအရ သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Dec. 29 (Xinhua) — A more contagious variant of COVID-19 that was first discovered in Britain was identified in the U.S. state of Colorado on Tuesday, according to the state’s governor.
“There isalot we don’t know about this new COVID-19 variant, but scientists in the United Kingdom are warning the world that it is significantly more contagious,” he said.
The United States has recorded nearly 19.5 million cases with over 337,400 related deaths as of Tuesday afternoon, according to the real-time count kept by Johns Hopkins University. Enditem
Pedestrians walk pastabooth selling festive decorations in New York, the United States, Dec. 22, 2020. (Xinhua/Wang Ying)